China HRC65 khabhayithi ubude obude 2F ibhola ngeempumlo Ukuphela Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
1. Intsimbi entle ye-WC isiseko esinobungqongqo obuphezulu, igutyungelwe nge-Nacos yakudala eluhlaza okwesibhakabhaka nano, ukutyabeka i-nano, ukunxiba ukunganyamezeli.
2.Ukususwa kwe-chip enkulu, ukukhutshwa ngokukhawuleza kwe-chip, akukho lula ukunamathela kwimela, ukuqonda ukusebenza okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu kunye nokubengezela ngakumbi kwendawo yokusebenza.
3. Isetyenziselwa ngokukodwa isantya esiphezulu sokucheba umatshini we-CNC wokugaya, onokonyusa ukuguda, ukunciphisa ukungalingani, ukunciphisa inani lezixhobo ezitshintshayo, ukuphucula ukusebenza kwesixhobo somatshini, kwaye ugcine ixesha lokuqhubekeka Isixhobo
4. Amandla okusika alungelelanisiwe, aphelisa ukutya okungalinganiyo kwaye alungele ngakumbi ukuhanjiswa.
Kufuneka siqhubeke nokuxhasa "umgangatho, ubanzi, ubuchule" beshishini lomoya "onyanisekileyo, onoxanduva, onobuchule" wenkonzo, thobela ikhontrakthi kwaye uthobele igama, iimveliso ezikumgangatho wokuqala kunye nokuphucula iinkonzo ezamkelekileyo kubathengi baphesheya.
Siphumelele igama elihle phakathi kwabathengi baphesheya nakwasekhaya. Ukubambelela kwimigaqo yolawulo "yokuthenga ngetyala, abathengi kuqala, ukusebenza okuphezulu kunye neenkonzo eziqolileyo", samkela ngokufudumeleyo izihlobo ezivela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuze zisebenzisane nathi.
Sinesabelo esikhulu kwimarike yehlabathi. Inkampani yethu inamandla oqoqosho olomeleleyo kwaye ibonelela ngenkonzo yokuthengisa ebalaseleyo. Siye saseka ukholo, ubuhlobo, ubudlelwane kwezoshishino imvisiswano kunye nabathengi kumazwe ahlukeneyo. , njenge-Indonesia, iMyanmar, i-Indi kunye namanye amazwe akumazantsi mpuma eAsia kunye neYurophu, iAfrika neLatin America.
Egqithileyo Ama-HRC ama-Carbide ama-4 oMgangatho oFulethi oBude obuPhezulu beeNdawo zokuSebenzisa iiMitha
Okulandelayo: I-65 yeHRC khabhayithi 4 Ubungakanani obuqhelekileyo beFlit Corner Radius End Mills